ကိုဗစ် ဖြစ်ဖူးတဲ့ သူ ဟာ ပြန်ဖြစ်နိုင်သလား? ဒါလည်း အတော်များများ က မေးကြတဲ့ ကိစ္စပါ။ – Let Pan Daily
ကိုဗစ် ဖြစ်ဖူးတဲ့ သူ ဟာ ပြန်ဖြစ်နိုင်သလား? ဒါလည်း အတော်များများ က မေးကြတဲ့ ကိစ္စပါ။
“အချို့မှာပြန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်” အသေး စိတ်ရှင်းပြသွားပါ့မယ်။
အဲ့ဒီ ကိုဗစ်ဖြစ်ခဲ့သူဟာ.. (၁) ရောဂါပြင်း ပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ခဲ့သူ (moderate and severe) သမားလား? (၂) ရောဂါမပြင်းထန်သူ (mild) နဲ့ ရောဂါလက္ခဏာလုံးဝမပြခဲ့သူ (asymptomatic) သမားလား?
သေချာတာတစ်ခုက ကိုဗစ် ဖြစ်ပြီးလို့ ပြန်နေကောင်း လာသူတွေမှာ antibodies ထွက်ခဲ့တာတော့အမှန်ပါပဲ။ အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် သူများထက်တော့ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းပါလိမ့်မယ်။ ပြန်မဖြစ်တော့ဘူးစိတ်ချလို့ လုံးဝအာမမခံနိုင်ပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် (၂) သမားတွေကို ပိုဂရုစိုက်ပါလို့ပြောတာ။
အမေရိကန်သမ္မတ ထရမ့်တောင် ကိုဗစ်ကပြန် နလန်ထလာတော့ သူပြန်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ရယ်၊ ပြန်မဖြစ်ပဲရောဂါပြီးနေရင်တောင် ဘယ်လောက်ကြာကြာခံမလဲဆိုတာရယ်ကို အသေအချာဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးလို့တောင် ပြောခဲ့သေးတာ။
အဲ့ဒီလူနာ ၅၉ ေယာက္မွာ …
၁၀ ယောက်က ရောဂါလက္ခဏာလုံးဝမပြခဲ့တဲ့ asymptomatic သမားတွေ၊ ၁၀ ယောက်က ရောဂါလက္ခဏာမပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ mild သမားတွေ၊ ၃၂ ယောက်က ရောဂါအထိုက်အလျောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ moderate သမားတွေ၊ ၇ ယောက်က ရောဂါပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ severe သမားတွေ၊ အဲ့ဒီမှာအဓိကလေ့လာတာက ရောဂါဖြစ်ဖူးသူတွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကတုန့်ပြန် တဲ့ B-cells နဲ့ T-cells (သွေးဖြူဥတွေ) ကိုလေ့လာတာ။
asymptomatic နဲ့ mild သမားတွေမှာ Covid-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကိုမှတ်မိမယ့် virus-specific germinal center (GC) B-cells response ပမဏအလုံအလောက်မတွေ့ရဘူး။
နိဂုံးချုပ်ပြောရရင် အခုတင်ပြခဲ့တာဟာ ရောဂါပြန်ဖြစ်နိုင်တဲ့ အနေအထားကို သုသေသနပြုထားတဲ့စာတမ်းတစ်ခုက တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့က ၁၀၀၀၀၀ မှာ ၁ ယောက်ပြန်ဖြစ်နိုင်ရင်တောင် ကိုယ်မပါစေဖို့ သတိပေးမှာပါ။ အထူးသဖြင့် ရောဂါမပြင်းထန်ခဲ့တဲ့သူတွေကို သုသေသနတွေ့ရှိချက်ကို အသိပေးတာပါ။